သံမဏိ သွင်းကုန်များ အပေါ် အမေရိကန်၏ အကောက်ခွန် တိုးမြှင့်ကောက်ခံမှု တောင်ကိုရီးယားက စိတ်မကေ?? - Yangon Media Group
သံမဏိ သွင်းကုန်များ အပေါ် အမေရိကန်၏ အကောက်ခွန် တိုးမြှင့်ကောက်ခံမှု တောင်ကိုရီးယားက စိတ်မကေ??
ဆိုးလ်၊ မတ် ၉
တောင်ကိုရီးယား ကုန်သွယ် ရေးဝန်ကြီး Paik Ungyu က အ မေရိကန်အစိုးရ၏ သွင်းကုန်အပေါ် အကောက်ခွန် ကြေညာချက်သစ် ထုတ်ပြန်လိုက်၍ ကမ္ဘာ့ကုန်သွယ် ရေးအဖွဲ့၏ ကန့်ကွက်ခြင်း ခံရ သောကြောင့် စိတ်မကောင်းဖြစ်မိသည်ဟု မတ် ၉ ရက်က ထုတ်ဖော် ပြောကြားလိုက်ကြောင်း သိရသည်။
အမေရိကန်သမ္မတ ဒေါ်နယ် ထရန့်၏ ကနေဒါနှင့် မက္ကဆီကိုမှ သံမဏိနှင့်အလူမီနီယံသွင်းကုန်များအပေါ် ၂၅ ရာခိုင်နှုန်း ကောက်ခံမည်ဟူ၍ အမိန့်ကြေညာချက်တစ်ရပ် ထုတ်ပြန်လိုက်ပြီးနောက် တောင်ကိုရီးယားကုန်သွယ်ရေး၊ စွမ်းအင်နှင့်စက်မှုဝန်ကြီးက ထိုကဲ့သို့ ထုတ်ဖော်ပြောဆိုလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။”အမေရိကန်ရဲ့ ယင်းဆုံးဖြတ်ချက်ကြောင့် ကမ္ဘာ့ကုန်သွယ်ရေး ကဏ္ဍအသီးသီးမှာ အကုန်ဂယက် ရိုက်ကုန်ကြတာမို့ စိတ်မကောင်း ဖြစ်မိပါတယ်”ဟု ကိုရီးယား သံမဏိလုပ်ငန်းရှင်များနှင့် တွေ့ဆုံပွဲတွင် ပြောဆိုလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။
”အမေရိကန်ရဲ့ ကြေညာချက်ဟာ တောင်ကိုရီးယား သံမဏိလုပ်ငန်းတွေ အမေရိကန်ကိုပို့ရာမှာလည်း လာထိခိုက်ပါတယ်”ဟု ၎င်းက ဆက်လက်ပြောကြားလိုက်သည်။ ယင်း ၂၅ ရာခိုင်နှုန်း ကောက်ခံမည်ဟူသော ကြေညာချက်အား နှစ်နိုင်ငံ စီးပွားရေးနှင့် လုံခြုံရေး ဆက်စပ်မှုရှိနေခြင်းကို ထောက်ထား၍ ပြန်လည်စဉ်းစားပေးပါရန် ၎င်းက မေတ္တာရပ်ခံလိုက်သည်။ အလားတူပင် တောင်ကိုရီးယား၏ အခြားသောပို့ကုန်များအ ပေါ် အခွန်ကောက်ခံမှု ကြီးမားနေသည်များအားလည်း ပြန်လည်ဖြေ လျှော့နိုင်ရန် သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်အား တစ်ပါတည်း တင်ပြသွားမည် ဖြစ်သည်ဟုလည်း သိရှိရသည်။
တိုင်းဒေသကြီး ဝန်ကြီးချုပ်နှင့် အတူ သစ်တောရေးရာ ဝန်ကြီး နုတ်ထွက်ပေးရေး ဆန္ဒထုတ်ဖော်မှု လွဲမ??
”ပရိသတ်တွေရဲ့ တွန်းအားပေးမှုတွေကြောင့် ပြောင်းလဲလာတဲ့ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေ အများကြီးကို မြင?